पति परिवर्तन के भने? पुरुष व्यभिचार को कारण
"तिनीहरूले खुसीसाथ कहिल्यै पछि बस्ने र एक दिन मृत्यु ..." हामीलाई बीचमा कसले यस्तो सम्बन्ध सपना देख्यो छैन? तर, दुर्भाग्य, हाम्रो आधुनिक जीवन छैन त सुन्दर, एक परी कथा जस्तै छ। धेरै जोडे अप तोड्न र यसको लागि कारण हजारौं छ, तर अक्सर मुख्य कारण राजद्रोहको छ। र सबै भन्दा गलत तथ्याङ्क अनुसार -, पाठ्यक्रम, मानिसहरू छ। के भने पति परिवर्तन? र सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, एक मानिस विश्वस्त gait के कारण "बाँकी छ"? यी प्रश्नहरूको जवाफ र आफ्नो प्रिय संग सम्बन्ध राख्न चाहन्छ हरेक केटी हुनुपर्छ पत्ता।
बहुविवाहलाई मानिसहरू आनुवंशिक स्तरमा राखे। "विश्वासघात जीन" - वैज्ञानिकहरूले मानिसहरू त्यहाँ एक तथाकथित छ कि सिद्ध गरेका छन्। जापान, उदाहरणका लागि, महिला लामो आफूलाई यो कारक गर्न resigned छन्। तिनीहरूले समय समयमा आफ्नो साथीहरू, प्रेम को priestesses संग एक बैठक सन्तुष्ट छन्। एक सम्बन्ध मा झूट, पति परिवर्तन नगर्न तिनीहरूलाई मदत तर परिवार, सधैं खुसी र सन्तुष्ट छोड्दा हुनेछ भन्दै यस Justifying। निस्सन्देह, तपाईंले यो दृश्य तपाईंलाई नजिक छ भने, यो संस्करण लीन गर्न सक्नुहुन्छ। तर के यौन सम्बन्ध एक किसिम मानिसलाई ड्राइव र कि यो परिवर्तन रोक्न सम्भव छ बुझ्न यो सम्भव छ रूपमा?
के कारणले यौन मामलामा dissatisfaction गर्न पति परिवर्तन भने
अक्सर मुख्य कारण मध्ये एक छेउमा सम्बन्ध, यौन मामलामा dissatisfaction छ किन। हरेक सक्षम-bodied मानिस कम्तीमा 10 पटक एक दिन सेक्स बारेमा सोच्ने, र यी विचार र चाहना आफ्नो सहभागिता साथ उतार्ने गरिने छैन भने, त्यसपछि ढिलो होस् वा पछि आफ्नो प्रेमीका कामुक मोजमस्ती नयाँ हेरोइन पाउनुहुनेछ। यो कुनै गोप्य कि आवेग र अन्ततः छ यौन इच्छा कम। बानी र monotony सम्बन्ध नाश। र एक केटी को लागि मुख्य लक्ष्य एक सम्बन्धमा पट्टाइ रोक्न हुनुपर्छ। विश्वासघात र अलग जोगिन गर्न, तपाईं को लागि आफ्नो प्रिय फरक सधैं छन् हुन छ। म सबै समय हरेक दिन एक मानिस तपाईं केहि नयाँ खोल्न गर्नुपर्छ हुनुपर्छ। बाह्य र आन्तरिक परिवर्तन प्रयोग, को नडरा, र, पाठ्यक्रम, आफ्नो सेक्स जीवनमा नवीनता बनाउन।
पति कारण न्यानोपन को कमी लागि परिवर्तन के यदि
विश्वासघात अर्को साधारण कारण न्यानोपन को अभाव हुन सक्छ। , बच्चाहरु हेरचाह पैसा र बजेट निर्धारण कमाउन, जीवन को एक साधारण तरिका - पारिवारिक जीवन धेरै कुरा समावेश छ। तर यस्तो महत्त्वपूर्ण कारक मनमा कुरा हृदय रूपमा, एक फिर्ता सीट लिन्छ। एक मानिस तपाईं आफ्नो चिन्ता, भावना र डर बारेमा बताउँछ। किनभने unexpressed रिसले र निराशाले तपाईं बीच तनाव। यो बिन्दुमा थियो, तपाईं अन्य एक, जो सुन्न हुनेछ, समर्थन र बुझ्न प्राप्त गर्न सक्छ। यो नदेऊ! प्राय कहिल्यै समस्या टाढा जाने र जरुरी समस्या छलफल गर्ने मानिस संग कुरा!
पति परिवर्तन र राम्रो को खोज मा जान्छ के भने
र, को पाठ्यक्रम, यो मूल्य मानिस सबै भन्दा राम्रो को खोज मा जान्छ भनी उहाँ सम्झनुहुन्छ छ। र यो उहाँले तपाईं विवाहित भने, तपाईंले एक सुन्दर राजकुमारी थिए, र वर्ष को एक जोडी पछि, कष्टप्रद स्रिउ परिणत छैन अचम्मको छ। मार्च 8 र आफ्नो जन्मदिन मा - तपाईं धेरै गलत तपाईं आफ्नो पति भनेर सोच्न र थाहा तपाईं थप ठीक दुई पटक एक वर्ष, बिदाको लागि ठूलो हेर्न कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भने छन्। हेर्न राम्ररी, तपाईंले आफ्नो टाउको सानो सीङ तोड्न थाल्छ रूपमा हेर्न सक्छ दर्पण जाने। सबै मानिसहरू सधैं सुन्दर, द्वारा आकर्षित गर्दै राम्रो-groomed महिला र आफ्नो पति कुनै अपवाद छ। कुनै curlers, यो मृत सागर देखि माटोको छ पनि भने, कोट र भयावह माटोको मास्क फिक्का। तपाईं सधैं कुनै दोष नभएको हुनुपर्छ - यो तपाईं के दिन र दिन को के समय, तपाईं अब कहाँ, सँगै बस्ने गरेका छन् कति कुरा छैन। यदि यसलाई समय र प्रयास छैन। यो एक धन उसलाई जीवित के उहाँलाई स्मरण गराउन लायक छ।
साहसी हुन, मौलिक परिवर्तन गर्न नडराऊ - परिवर्तन बाल, लुगा, व्यवहार शैली, यो सबै बस यसलाई तपाईं चासो damped रहनुहोस्। थ्रिल्स खाँचो मानिसहरूको बहुमत र मात्र होइन बिदा मलाई विश्वास छ,। र तपाईं अझै पनि धोखा यदि भयो, र यसबाहेक पति निरन्तर, परिवर्तन तपाईं के आफूलाई लागि निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी सिकेका: आफ्नो परिवारको लागि लड्न र प्रेम एक फर्कन वा नयाँ सम्बन्ध निर्माण। परिवर्तन कुनै पनि मामला मा अपरिहार्य छ - तर यो सायद यी परिवर्तनहरू राम्रो थिए बनाउन, सबै आफ्नो हातमा छ। सद्भाव र भरोसा, कार्य आफ्नो जीवन भर्न मुख्य कुरा हो, र सफल!
एक विवाहित मानिसको Mistress। म उनको हुनुपर्छ?
Casanova - यो हुनुहुन्छ? Giacomo Casanova को इतिहास। शब्द को आधुनिक अर्थ "Casanova"
मानिसहरू किन धोखा गर्छन्? पुरुष विश्वासघात को कारण
कसरी उनको डाह सामना गर्न? लक्षण र महिला डाह को कारण
कारमा फोनको लागि चुम्बकीय धारक: समीक्षा। स्मार्टफोनका लागि कार धारकहरू
किन आरडब्ल्यू रगत दान? यो अनुसन्धान कस्तो र कसको आवश्यक छ?
के तपाईंलाई बच्चाहरु को लागि पनीर चाहिन्छ? जब तपाईं बच्चालाई पनीर दिन सक्नुहुन्छ
फुकेत - सुनामी (2004): इतिहास र नतिजा
खाना पकाउने चकलेट क्रिम चकलेट केक: विभिन्न विकल्पहरू व्यञ्जनहरु
जीवनी Angelina Vovk - ज्ञात टिभी प्रस्तोता
कसरी myasthenic संकट गर्छ? उपचार
विद्युत आपूर्ति एक उच्च भोल्टेज भइरहेको